Lake Titicaca: àgwà, mmalite na ihu igwe | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 14/01/2022 10:00 | Ciencia
El Ọdọ mmiri Titicaca o nwere nnukwu mmiri nke na-ekpuchi ókèala Peru na Bolivia, a na-edekwa ya dị ka ọdọ mmiri kachasị elu n'ụwa, ọ nwere mmiri na-agagharị agagharị, nke kwesịrị ekwesị maka ịkụ azụ, ma nwee ụfọdụ àgwàetiti ndị na-ese n'elu mmiri nke e wuru n'elu ya, ebe e nwere ya. bụ obodo zuru oke. A makwaara ya dị ka Oké Osimiri Andes.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọdọ mmiri Titicaca, mmalite ya na njirimara ya.
2 Mmalite nke ọdọ mmiri Titicaca
3 Ihu igwe nke Lake Titicaca
Ọdọ Mmiri Titicaca bụ otu n'ime ọdọ mmiri kachasị mma n'ụwa ma dị na elu nke mita 3.812. N'ihi ọdịdị ala ya dị iche iche, o nwere ihe dị iche iche nke mba abụọ Central America na-ekekọrịta, nke o nwere. 56% nke mba Peruvian na 44% nke mba Bolivian.
Ma àgwà ya anaghị akwụsị ebe ahụ, n'ihi na mgbe anyị jiri mgbatị ya nke 8.560 square kilomita tụnyere ọdọ mmiri ndị ọzọ dị na mpaghara Latin America, ọdọ mmiri Titicaca bụ ọdọ mmiri nke abụọ kasị ukwuu na mpaghara a buru ibu. Akụkụ ya na-ekpuchi kilomita 204 site n'akụkụ ruo n'akụkụ, na mpempe nke 1.125 kilomita nke ụsọ oké osimiri dị n'akụkụ elu ya, nke na-emekwa ka ọ bụrụ ọdọ mmiri kachasị elu na nke kachasị mma n'ụwa.
Tụkwasị na nke a, ọdọ mmiri a mara mma nwere ihe karịrị agwaetiti 42 n'ime, nke kachasị ama bụ Isla del Sol, nke dị mkpa karịa ndị ọzọ n'ihi na Alaeze Ukwu Inca malitere n'ebe ahụ, ya mere ọ na-egosiputa usoro ihe odide na ha bụ akụkụ nke a. mmepeanya oge ochie na-egosi ịdị adị. Ugbua, ndị bi na ya bụ ụmụ amaala ka ukwuu, ma n'agbanyeghị na ha nwere mmetụta ụfọdụ nke omenala ọgbara ọhụrụ, jigidere ọtụtụ n'ime ọdịnala ha sitere na agbụrụ Inca.
Mmalite nke ọdọ mmiri Titicaca
A na-ebute ike tectonic site na magma Ụwa, na ike geothermal a na-agbanwe ka ọ bụrụ ike arụ ọrụ nke na-eme ka mmegharị nke efere dị n'okpuru ala nke mejupụtara kọntinent anyị. Ebe ọdọ mmiri Titicaca si malite bụ n'ihi ike tectonic ndị a na-eme ka ugwu ọwụwa anyanwụ na n'ebe ọdịda anyanwụ nke Central America Andes na-ebili. Ike nke mmegharị a na-emepụta nguzobe nke plateaus, nke bụ ihe enyemaka dị elu dị larịị. A na-eji aha Meseta de Collao mara ala dị larịị.
Plateau Collao, nke dị na elu karịa mita 3.000, na-eme ka mmiri ahụ kpụ ọkụ n'ọnụ n'oge Ice Age, ya mere usoro ntinye ego emeghị. Nke a mere ka ọ nọgide na-enwe ọdịdị ya na ịdị omimi ya, n'ihi ya, mgbe oge etiti ahụ mere, ice ahụ gbazere wee ghọọ Ọdọ Mmiri Titicaca, nke a maara ugbu a dị ka Ọdọ Mmiri Titicaca.
Ọnọdụ ihu igwe dị obere kpọrọ nkụ na nke kpọrọ nkụ nke ọdọ mmiri intra-caudal nke Peru na Bolivia na-emetụtakwa ntakịrị mmiri mmiri ha na-adịghị ngwa ngwa, na-atụnye ụtụ na nnọgidesi ike nke oke mmiri a.
Nnyocha kpụ ọkụ n'ọnụ nke usoro ọdọ mmiri dị larịị egosiwo na Ọdọ Mmiri Titicaca bụ n'ihi mmalite nke usoro oge ochie nke malitere n'oge Early Pleistocene, 25,58 ruo 781,000 afọ gara aga, ma gbanwee na njedebe nke Pliocene. .
Mgbanwe ihu igwe nke mere n'oge ndị a, malite na ihu igwe na-ekpo ọkụ ruo n'oyi na ihu igwe mmiri, metụtara ịdị adị na nha Ọdọ Titicaca na ọdọ mmiri ndị ọzọ dị larịị. N'otu ihe omume ahụ, ndị agha tectonic nke ugwu-ndịda gbajiri mgbada ugwu Cordillera. N'ikpeazụ, na Lower Pleistocene 2,9 nde afọ gara aga, mgbe Ọdọ Mmiri Cabana malitere na tupu ịdị adị nke Ọdọ Mmiri Baliwan, e hiwere oghere tectonic nke Ọdọ Mmiri Titicaca mara mma ga-anọ.
Ihu igwe nke Lake Titicaca
Ọnọdụ ihu igwe nke ọdọ mmiri Titicaca dabere n'ịdị elu ya, ebe ọ bụ ọdọ mmiri karịrị mita 3.000 n'elu oke osimiri, nwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti ehihie na abalị. Okpomọkụ nwere ike iru 25 Celsius C n'ehihie na 0 Celsius C n'abalị.
Achọpụtara na okpomọkụ nke ọdọ mmiri a na-adị kwa afọ ga-abụ 13 Celsius. N'akụkụ ya, okpomọkụ dị n'elu mmiri na-adị n'etiti 11 na 25 degrees Celsius na August na n'etiti 14 na 35 degrees Celsius na March.
O nwere ike ịbụ ihe ijuanya na ịnọ n'ịdị elu ahụ okpomọkụ n'ụbọchị na-ekpo ọkụ nke ukwuu, nke a bụkwa n'ihi na ọdọ mmiri Titicaca nwere ike ịhazi okpomọkụ n'ihi na ọ na-etinye ike anyanwụ n'oge ehihie, nke dị n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ. N'abalị, ike a na-apụ apụ, ya mere okpomọkụ adịghị oyi dịka anyị tụrụ anya ya.
Ihe ka ukwuu n'ime mmiri dị n'Ọdọ Mmiri Titicaca na-efunahụ site na ikpo ọkụ, ihe na-esiwanye ike na mpaghara ụfọdụ ebe a na-emepụta ọnụ ụlọ nnu, n'ihi na a na-etinye mineral ndị dị na ọdọ mmiri site na osimiri ma na-edebe ya.
A na-eme atụmatụ na ọ bụ naanị 5% nke mmiri ọdọ mmiri ka a na-ebuba n'ime osimiri ahụ Desaguadero n'oge mmiri dị elu, nke na-asọba n'Ọdọ Mmiri Poopó, nke dị nnu karịa Ọdọ Mmiri Titicaca. Mmiri nke na-esi n'Ọdọ Mmiri Titicaca na-ejedebe n'ezie na Salar de Coipasa, bụ ebe obere mmiri na-asọpụta ngwa ngwa.
Ihe ọzọ e ji mara hydrology ya bụ na osimiri ndị mejupụtara mmiri mmiri ya dị mkpụmkpụ nke ukwuu, ebe a na-amata na osimiri Ramis, Asangaro na Calabaya bụ isi na nke kacha ogologo, nke Ramis bụ nke kachasị ogologo na 283 km.
Ntugharị nke ọdụ ụgbọ mmiri ndị ahụ dị obere ma na-adịghị agafe agafe, a na-ekpebikwa onyinye ha bụ mmiri ozuzo nke oge, nke dị n'etiti ọnwa Disemba na March, ebe ụkọ mmiri ozuzo ma ọ bụ enweghị mmiri ozuzo dị n'etiti ọnwa June na November.
A na-eji akụkụ nke ọdọ mmiri Titicaca mara ntakịrị mkpọda, nke mere omume ha ji eme ihe na-adịghị mma, ya bụ, sinuous, nke pụtara na ọ dịghị ọgba aghara, nke a na-emetụta nghọta, ụdị anụ ọhịa na osisi ndị metụtara usoro. .
A na-eji mmiri nke ọdọ mmiri Titicaca mara na ọ bụ mmiri na-adịghị mma na enweghị usoro iji chọpụta, ịchịkwa na nyochaa ịdị mma nke mmiri ahụ. N'ezie, ihe nlele nke emegoro bụ nke a kapịrị ọnụ, ya bụ, A mụọbeghị ihe ka ukwuu n'elu ọdọ mmiri na nke a. Otú ọ dị, a maara na mmiri nke dị ugbu a dị na Bay nke Puno na-emetọ ya ka a na-agbanye mmiri n'ime obodo ahụ n'enweghị ọgwụgwọ ọ bụla.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ọdọ mmiri Titicaca na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Lake Titicaca
A hụrụ mgbawa nke ugwu mgbawa nke Hunga Tonga na Spain
Iju mmiri na China